मन्त्रिमण्डल हेरफेरको तयारी गरेका मुख्यमन्त्री शाही किन पछि हटे? - १७ कार्तिक २०७७, NepalTimes
मन्त्रिमण्डल हेरफेरको तयारी गरेका मुख्यमन्त्री शाही किन पछि हटे?
१७ कार्तिक, काठमाडौँ ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले आइतबार मन्त्रिमण्डल हेरफेरको तयारी गरेका थिए ।
तर केन्द्रको निर्देशनपछि उक्त कार्यबाट मुख्यमन्त्री पछि हटेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन दिएपछि शाही मन्त्री हेरफेर गर्ने तयारीबाट पछि हटेका हुन् ।
आइतबार बहालवाला मन्त्रीहरुलाई हटाएर नयाँ मन्त्री नियुक्तिको तयारीमा जुटेका शाही एकाएक पछि हटेका छन् । मुख्यमन्त्री शाहीले सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र उद्योग,पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढालाई राजीनामा माग गरेका थिए ।
उक्त सूचना पाएलगत्त प्रधानमन्त्री ओलीले दबै मन्त्रीलाई राजीनामा नदिन निर्देशन दिएका थिए । ती दुबै मन्त्री ओली पक्षका थिए । उनीहरुलाई हतारमा राजीनामा नदिन निर्देशन दिएका थिए ।
केन्द्रमा सहमति भइरहेकोले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिन भनेपछि राजीनामा रोकिएको थियो भने यता प्रचण्डले पनि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन नगर्न निर्देशन दिएकोले आइतबारको लागि तय गरिएको मन्त्रिमण्डल हेरफेरको कार्यक्रम रोकिएको मुख्यमन्त्री शाहीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
यस अघि मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध असोज २५ गते नेकपाका १८ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि नेकपा कर्णालीभित्र विवाद उत्पन्न भएको हो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री शाहीले आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने ओली पक्षका मन्त्रीलाई राजीनामा दिन दबाब दिएका थिए।